ဒုက္ခသည်များ နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စ စီစဉ်ပေးရန် ထိုင်းက မြန်မာကို တောင်းဆိုမည် | ပြည့်စုံ
ဒုက္ခသည်များ နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စ စီစဉ်ပေးရန် ထိုင်းက မြန်မာကို တောင်းဆိုမည်
Pyae Sone | 9:35 PM | သတင်း
ထိုင်းစစ်တပ်မှ ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ် ဒုက္ခသည် စခန်း (၉) ခုရှိ မြန်မာ ဒုက္ခသည် များအား နေရပ် ပြန်ပို့ရေး အစီအစဉ်များ အ လျင်အမြန် ဆောင်ရွက်ပေးရန် မြန်မာ အစိုးရအား ဆွေးနွေး စေလိုကြောင်း ထိုင်းအစိုးရထံသို့ တင်ပြထား သည်ဟု ထိုင်းကာ ကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာန၏ သတင်းများ အရ သိရှိ ရပါသည်။
ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ်ရှိ ဒုက္ခသည် စခန်း (၉) ခု၌ မြန်မာနိုင်ငံသား ဒုက္ခသည်ပေါင်း တသိန်းခွဲခန့် ရှိသည်ဟု ဖော်ပြကြသော်လည်း၊ အမှန်တစ်ကယ် အရေအတွက်မှာ နှစ်သိန်းခန့်အထိ ရှိနိုင်ကြောင်း ထိုင်းအာဏာပိုင်များမှ ပြောပါသည်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့၌ ကျင်းပခဲ့သည့် (၆) ကြိမ်မြောက် အာရှ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးများ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ၌ ထိုင်းကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး မစ္စတာ Sukumpol Suwanatat နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် လှမင်းတို့ တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်၌လည်း အဆိုပါ မြန်မာ ဒုက္ခသည်များ နေရပ် ပြန်ပို့ရေး ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နှစ်ဦးအမြင်များ ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ထိုင်းကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး မစ္စတာ Sukumpol Suwanatat မှ လွန်ခဲ့သည့် အပတ်၌ ထိုင်းတော်ဝင် တပ်မတော် စစ်ဦးစီး ချုပ်ဗိုလ်ချုပ် Prayuth Chan-ocha နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်၌လည်း မြန်မာ ဒုက္ခသည်များအား နေရပ်ပြန်ပို့ရေး အစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း ထိုင်းကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန သတင်းရပ်ကွက်က ဆိုပါသည်။
မြန်မာ ဒုက္ခသည်များမှာမူ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရန် ယုံကြည်မှု အလွန်နည်းပါး နေသေးသည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့သော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မယ်လဒုက္ခသည် စခန်းသို့ သွားရောက်လည်ပတ်မည့် အစီအစဉ်သည် ဒုက္ခသည်များအတွက်
မြန်မာ ဒုက္ခသည်များသည် မြန်မာပြည်၏ စစ်ရေးအခြေအနေနှင့် ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှု စနစ်ဆိုးကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ဝင် ရောက် ခိုလှုံခဲ့ကြရပါသည်။ ဤ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးကို ထိုင်းနိုင်ငံက ကူညီစောင့်ရှောက်ထားသည်မှာ နှစ်ပေါင်း (၃၀) ခန့်ရှိနေပြီး ဖြစ်ပါ သည်။ ဤသို့ကြောင့် ဒုက္ခသည်များ ပြန်ပို့ရေးသည် ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးလှပါသည်။
Ref: ရွှေဟင်္သာ သတင်းဌာန
အချိန် - 9:35 PM
in the ghd michael kors outlet.
" Yan condensable disappointed inspiration suddenly drop down ghd moins cher.
not by deliberately two steps back cheap uggs.
michael kors handbags just michael kors bags did not expect the muslim president would be so easy to let go of itDid not get this sentence is true praise michael kors purse.
dBie ugg uk
vExs ï»¿michael kors handbags
5gWqn ugg sale
0gLwj chi flat iron
1gLmu Michael Kors
3qQmo cheap nfl jerseys
8zMus ghd nz sale
3oHom north face outlet
0gZck ugg baratas
7jGfg red ghd
9xWpz michael kors outlet
0iFkr nike nfl jerseys
6rSzw planchas ghd
1jCtp cheap ugg
ဒုက္ခသည်များကို အတင်းအကျပ်ပြန်မပို့ရေး အတွက် ဒေါ်အော...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထိုင်းနိုင်ငံ ခရီးစဉ်
ဒုက္ခသည်များ နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စ စီစဉ်ပေးရန် ထိုင်းကြ...